Riedel သည် 'ပျက်ကွက်မှုသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်သည့်နေရာ' သို့သွားရန်မစ်ရှင်အတွက် PTScientists များနှင့်မိတ်ဖက်ပြုသည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » '' ပျက်ကွက်တစ်ခု Option ကိုမဖြစ် '' အဘယ်မှာရှိမွန်းမှမစ်ရှင်များအတွက် PTScientists အတူအဖော်မှ Riedel
'' ပျက်ကွက်တစ်ခု Option ကိုမဖြစ် '' အဘယ်မှာရှိမွန်းမှမစ်ရှင်များအတွက် PTScientists အတူအဖော်မှ Riedel
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - သြဂုတ်လ 31, 2017 - ဘာလင်အခြေစိုက် PTScientists စီးပွားဖြစ်အာကာသကုမ္ပဏီဦးဆောင်သောမွန်းမှလာမည့်မစ်ရှင်များအတွက်နည်းပညာမိတ်ဖက်သကဲ့သို့, Riedel ဆက်သွယ်ရေး တစ်ဖန်မစ်ရှင်-အရေးပါစနစ်များကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်၎င်း၏စွမ်းရည်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ Riedel PTScientists လပေါ်ဆင်းသက်နိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖြစ်ရည်ရွယ်ထားတံ့သောအတွင်းရှိသဲစီမံကိန်းကိုများအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် signal ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများပေးနေပါသည်။
လမှမစ်ရှင်, လမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအာကာသယာဉ်နေရာကြိုးပမ်းနှစ်ခုအဝေးမှထိန်းချုပ် Audi လ quattro မွန်း Rovers စေလွှတ်နှင့်နောက်ကျောကမ္ဘာမြေအတွက်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မယ် HD။ လာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိမှုကြောင့်, စီမံကိန်း PTScientists နှင့်၎င်းတို့၏အဓိကသော့ချက်နည်းပညာမိတ်ဖက်, Audi နှင့် Vodafone ၏လုပျငနျးဖြစ်ပါတယ်။
"Riedel မှာကျနော်တို့ stratosphere ထံမှဖေလဇ်မင်း Baumgartner ရဲ့စံချိန်ချိုးအခမဲ့-ကျဆုံးခြင်းခုန်ထောက်ပံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်ဖိအားအောက်တွင်ဖျော်ဖြေဖို့မသူစိမ်းပါပဲ။ အဆိုပါ Stratos စီမံကိနျး၏ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုပြီးနောက်, ငါလာမယ့်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုအံ့ဩ "Jacqueline Voss, မန်နေဂျာကော်ပိုရိတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာကပြောပါတယ် Riedel ဆက်သွယ်ရေး။ "ဟုအဆိုပါမွန်းဖို့မစ်ရှင်များအတွက်နည်းပညာမိတ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းငါတို့အဆိုတော်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့် MediorNet ဖြေရှင်းချက့်ကြီးမားတဲ့သေတမ်းစာသည်မဟုတ်, ကလည်းနောက်ကွယ်မှအလုပ်မလုပ်သောငါတို့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များအကြောင်းကို volumes ကိုပြော၏။ Riedel မှာကြှနျုပျတို့အားလုံးဤစီမံကိန်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဝမ်းသာပီတိနေကြတယ်။ "
PTScientists လ, 17 အတွက် Apollo 1972 ၏မှတ်သားလောက်ဆင်းသက် site ကိုရန်မစ်ရှင်များအတွက် Taurus-Littrow ချိုင့်ဝှမ်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤတည်နေရာကို Apollo 17 နေဖြင့်နောက်ကွယ်မှကျန်ကြွင်းရစ်သောအရာဝတ္ထုလပေါ် 45 နှစ်ကျော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပုံကိုကြည့်ဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာမြေရဲ့ Glory လွှတ်တင်နိုင်ရန်စီးပွားဖြစ် SpaceX ဒုံးပျံကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်, PTScientists '' ALINA အာကာသယာဉ်လပေါ်တွင်ပျော့-လေယာဉ်ဆင်းသက်နဲ့ Moon Rovers ၏ pair တစုံထုတ်မီ, လကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းမှသွားလာကြလိမ့်မည်။ ALINA လည်းနှစ်ခု Rovers နှင့် lander ALINA အကြား data ကိုဆက်သွယ်မှုအားဖွင့်တစ်ခု LTE ကိုအခြေစိုက်စခန်း-ဘူတာရုံအဖြစ်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်, စအနာဂတ်မစ်ရှင်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်း-ဘူတာရုံအဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသညျ။
Riedel ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမျက်နှာစာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာမိတ်ဖက်အဖြစ်, Riedel ယင်း၏အဆိုတော်ဒစ်ဂျစ်တယ် matrix ကိုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးနှင့်မစ်ရှင်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းကိုအပေါငျးတို့သရှုထောင့်အဘို့အ Bolero ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးမှတဆင့်မရှိမဖြစ်ဆက်သွယ်ရေးပေးပါလိမ့်မယ်။ အပြိုင်ခုနှစ်, Riedel MediorNet စနစ်များလ Rovers နေဖြင့်စုဆောင်းဗီဒီယိုဒေတာအပါအဝင်, မြေပေါ်မှာရှိသမျှ signal ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
"လပေါ်ယာဉ်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်မစ်ရှင်အပေါ်လူတစ်ဦးချင်းစီကနောက်ဆုံးမစ်ရှင်ဒေတာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအသင်း၏ကျန်နှငျ့ဆကျသှယျနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကြောင်းအရေးကွီး၏," ရောဘတ်Böhme၏ CEO ဖြစ်သူနှင့်တည်ထောင်သူကပြောပါတယ် PTScientists ။ "ကျနော်တို့က high-ဖိအား, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာန်ဆောင်မှုများပေးနေတဲ့ရှည်လျားသောတွင် track record ရှိကြောင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခံရဖို့ကျေနပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Riedel အဖွဲ့ပြီးသားငါတို့ကဲ့သို့အမှုအရာကိုဖော်ပြရန်သောအခါကြှနျုပျတို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုနားလည် '' အရေးပါတဲ့မစ်ရှင်။ ' "
Riedel နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.riedel.net.
PTScientists အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် PTScientists.com.
2008 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး PTScientists, စွယ်စုံအာကာသယာဉ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အာကာသအတွင်းအရေးပါသောအအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေး၏ကုန်ကျစရိတ်ခေါ်ခဲ့ဖို့ရှာကြံတဲ့ဘာလင်အခြေစိုက်စီးပွားဖြစ်အာကာသကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် [အီးမေးလျ protected] PTScientists နှင့်အတူနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အင်တာဗျူးတောင်းဆိုမှုများအတှကျသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောသတင်းအချက်အလက်များကို PTScientists.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။ အဆိုပါအာကာသယာဉ်နှင့် Rovers ၏အပိုဆောင်း high resolution ကတော့ပုံရိပ်တွေတောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာ Riedel ဆက်သွယ်ရေး
Riedel ဆက်သွယ်ရေး ဒီဇိုင်းများ, ထုတ်လုပ်နှင့်ထုတ်လွှင့်, လိုလားသူအသံ, အဖြစ်အပျက်, အားကစား, ပြဇာတ်ရုံ, လုံခြုံရေး application များအတွက်ရှေ့ဆောင် Real-time ဗီဒီယို, အသံဖိုင်, ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များဖြန့်ဝေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းဖြစ်ရပ်အိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ, ဖိုင်ဘာ Backbones ရဲ့နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်အရွယ်အစားဖြစ်ရပ်များအတွက်အလွယ်တကူစကေးကြောင်းကြိုးမဲ့ signal ကိုထုတ်လွှင့်စနစ်များကိုရေဒီယိုနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များများအတွက်ငှားရမ်းန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Riedel Wuppertal, ဂျာမနီအခြေစိုက်နှင့်ဥရောပ, သြစတြေးလျ, အာရှနှင့်အမေရိကတိုက်တစ်လျှောက်လုံး 450 နေရာများတွင် 19 ကျော်ကလူလုပ်ကိုင်နေသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/170831Riedel.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/Riedel_ALQ-at-Apollo-17-Artwork.jpeg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Apollo 17 အနုပညာလက်ရာမှာ ALQ
ဓာတ်ပုံ Credit: PTScientists / နာဆာ
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/Riedel-Communications-Logo.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: များအတွက် logo Riedel ဆက်သွယ်ရေး
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]% 20to% 20Partner% 20With%[အီးမေးလျ protected]%20for%20Mission%20to%20the%20Moon%20-%20https://goo.gl/gQSMfr
Audi ရဲ့ lunar quattro မွန်း Rovers ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ စီးပွားဖြစ်အာကာသကုမ္ပဏီ ပျက်ကွက်ခြင်းတစ်ခု Option ကိုမ Is လမှမစ်ရှင် မစ်ရှင်-အရေးပါစနစ်များ PTScientists Riedel SoftAtHome, MStar, CES2017 Stratos စီမံကိန်းကို ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-08-31
ယခင်: တိုးတက်လာသောအကြောင်းအရာဖြည့်ပံ့ပိုးပလက်ဖောင်းများ၏နှလုံးမှာဥရောပကော်မရှင်နေရာများ Telestream Lightspeed တိုက်ရိုက်နှင့် Vantage Transcoding
နောက်တစ်ခု: ကွမ်တမ်: Xcellis များအတွက် Veritone aiWARE